एमाले पत्तासाफ पार्न खोजेको सुइँको पाएपछि माधव नेपाललाई ओलीबाट खतरा ! - Compaq News
एमाले पत्तासाफ पार्न खोजेको सुइँको पाएपछि माधव नेपाललाई ओलीबाट खतरा !
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायमै रहने भनेपछि एमालेमा हलचल मच्चिएको छ ।केही समयअघिसम्म वाम एकताको प्रयास गरिरहेका एमालेमा केपी ओलीइतरका नेताहरूमा छटपटी बढेको हो । पूर्वअध्यक्ष नेपालले आइतबार सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा केपी ओलीले संसद् विघटन गरेको आत्मालोचना नगरेसम्म एकता र सहकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।
एमालेले संसद् विघटनमा कमजोरी महसुस नगरेसम्म उससँग चुनावी गठबन्धन वा पार्टी एकताको सम्भावना नरहेको नेपालले प्रस्ट्याए ।‘जसले संविधान मिच्ने काम गर्‍यो, पटक–पटक संसद् विघटन गर्ने काम गर्‍यो, त्यो पक्षले आफ्नो गल्ती–कमजोरी कति महसुस गरेको छ, यो कोणबाट हेर्ने हो भने कहीँ–कतै महसुस गरेको देखिँदैन ।
जे गरियो, गजब गरियो भनिसकेपछि त्यसमा पनि कुरा मिल्ने देखिएन,’ नेपालले भने, ‘त्यसमा महसुस भएको छ भने हामीलाई सुनाइदिनुहोला । त्यसपछि जिन्दगीभरि नकारात्मक भइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन, विचार मिल्नेहरू नै एक ठाउँमा उभिने हुन् ।’
नेता नेपालले आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धन भने कायमै रहने स्पष्ट गरे । ‘हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै एउटै पार्टीको बहुमतको सम्भावना अत्यन्तै कम छ, एकभन्दा बढी पार्टी मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था छ । नेपाली समाजमा मिलेर काम गर्ने संस्कृति छ, यसलाई जोगाउनुपर्छ,’ नेपालले भने, ‘आगामी चुनावसम्म त गठबन्धन कायम रहन्छ । त्यसपछि पनि यसलाई अघि बढाएर लैजानेमा ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।’
उनले मंसिरभित्रै संघ र प्रदेशको चुनाव हुने सम्भावना भएका कारण सिट बाँडफाँड छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा प्रदेश र संघमा तालमेल अलि सजिलो हुने सुनाए । अबको चुनावको तालमेल वा सिटको बाँडफाँडमा ढिला गर्न नहुने उनले बताए ।
जनयुद्धको अर्को चमत्कार, जनमुक्ती सेना बने ‘शान्तिका नायक’, बिश्वभर माओवादीको हाई हाई !
राज्य पुनःसंरचनाका लागि भएको सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएका धेरै जनामध्येका उनीहरू पनि थिए । २०५२ सालदेखि १० वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वमा दुई जोडी राजाराम पण्डित–कविता रिजाल तथा रमेश पराजुली–मेनुका सिलवाल पनि परिआए ‘मार्ने र मर्ने’ संकल्पसहित राज्यविरुद्ध लडेका थिए ।
उनीहरूलाई त्यस बेला नेपाल सरकारले मात्र होइन, अमेरिकालगायतले ‘आतंककारी’ को सूचीमा राखेका थिए । त्यस्तो ट्याग लागेमध्येका यिनै दुई जोडीले शान्ति पदक पाएका छन् ।
शान्ति प्रक्रियामा आएको डेढ दशकपछि नेपाली सेनामार्फत दक्षिण सुडानमा खटिएका उनीहरूलाई ‘विश्वशान्ति स्थापना’ मा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) ले पदक प्रदान गरेको हो ।
राष्ट्रसंघको आह्वानमा दक्षिण सुडानस्थित शान्ति स्थापनार्थ मिसनमा तैनाथ कालीध्वज गण १० औं डफ्फाका यी दुई जोडीलाई असार ३ गते नेपालका अन्य सैनिकसँगै पदक दिएर सम्मान गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । राजाराम पण्डित सहसेनानी र कविता रिजाल अमल्दार हुन् । रमेश पराजुली गुल्म कार्य हुद्दा र मेनुका सिलवाल हुद्दा हुन् ।
अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात यो घटनालाई शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण भागको रूपमा लिन सकिने मान्छन् । ‘पहिला उनीहरू माओवादीमा लागे पनि नेपाली सेनामा छिरेपछि विगतलाई बिर्सिए ।
सेनामा छिरेपछि त्यहाँको मूल्य–मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय छवि छ । त्यसैलाई उनीहरूले आत्मसात गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यी पूर्वलडाकुहरू सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा पनि तत्कालीन अवस्थामा परिवार र अन्य अवस्थाले माओवादीमा लागेको देखिन्छ । सेनामा छिरेपछि उनीहरू त्यहीअनुसार चल्न थाले ।’
सिद्धान्तअनुसार लागेका माओवादीहरू भने सेना समायोजनमा नबसेको पनि उनले बताए । नेपाली सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय छविका कारण उनीहरूले यस्तो मौका पाएको बस्न्यातको भनाइ छ ।
सरकार–माओवादी दुवै पक्षले माओवादीका पूर्वलडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने र स्वैच्छिक अवकाश लिने प्रस्ताव ल्याएका थिए । २०६३ मंसिरमा सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो ।
नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को नेपाल आगमन र बिदाइ तथा त्यसपछि लामो रस्साकसीपछि २०६९ सालमा आएर मात्र सेना समायोजनको काम पूरा भएको थियो ।
२०६९ भदौ २१ गते सुरु भएको समायोजन छनोट प्रक्रियामा अधिकृतका लागि ७५ सहित पदिक, अन्य दर्जाका लागि जम्मा १४ सय ६० जना पूर्व माओवादी लडाकुले सेनामा समायोजन रोजेका थिए ।
सेनामा समायोजन भएका अधिकांशले यूएनको विश्व शान्ति मिसनमा गरेर काम गरिसकेको सैनिक स्रोतको भनाइ छ । तत्कालीन माओवादी लडाकु सेनामा समायोजनमा भएपछि यमबहादुर अधिकारी अहिले सहायक रथी भइसकेका छन् । उनी माओवादी लडाकुबाट सेनामा समायोजन भएर सबैभन्दा माथिल्लो पदमा पुग्ने व्यक्ति हुन् ।
दक्षिण सुडानमा पदक सम्मान पाउनेमा माओवादी लडाकुबाट सेनामा समायोजन भएर शान्ति स्थापना गर्न गएका दुई जोडीसँगै अर्को एक जोडी सह–सेनानी प्रमोद राउल (श्रीमान्) र सह–सेनानी ऋतु पाण्डे (श्रीमती) पनि रहेका छन् ।
यसपटक पदक पाउनेमा अर्को संयोग थियो, सेक्टर इस्टका कमान्डर तथा सिनियर नेसनल अधिकृत सहायक रथी दीपककुमार बानियाँ (बाबु) र मेडिकल अधिकृतमा कार्यरत प्राविधिक उपसेनानी डा. दिव्यप्रताप बानियाँ (छोरा) । उनीहरू दुवैले पदक पाएका हुन् ।
हुद्दाहरू रामकुमार खड्का र लक्ष्मण खड्का (जुम्ल्याहा दाजुभाइ) ले पनि एकैपटक पदक पाए । ‘यसपालि एक हिसाबले पदक पाउनेमा संयोग नै पर्‍यो,’ सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले भने ।